Hello Nepal News » कोपा हारे पनि ‘नो प्रोब्लेम’ : बार्सिलोनाले यही सिजन ला लिगा र च्याम्पियन्स लिग जित्ने !
कोपा हारे पनि ‘नो प्रोब्लेम’ : बार्सिलोनाले यही सिजन ला लिगा र च्याम्पियन्स लिग जित्ने !
स्पेनिस क्लब बार्सिलोना दुई दिनअघि मात्रै कोपा डेल रे फुटबलबाट आउट भयो । अवे मैदानमा एथ्लेटिक बिल्बाओसँग १–० ले हारेपछि बार्सिलोना सन् २०१० पछि पहिलोपटक कोपाको अन्तिम आठबाटै आउट भएको थियो । त्यसअघि बार्सिलोना सुपर कपबाट पनि आउट भएको थियो ।
लगातार दुई प्रतियोगिताबाट आउट भए पनि बार्सिलोना भने अझै पनि ला लिगा र च्याम्पियन्स लिग जित्ने दौडमा छ । यस्तो टोलीका डिफेन्डर जेरार्ड पिकेले बताएका छन् । कोपा हारेपछि मिडियासँग कुरा गर्दै उनले कोपा हार्नु खराब नतिजा भए पनि बार्सिलोनाले अझै पनि यही सिजन बाँकी दुई ठूला उपाधि जित्न सक्ने बताए ।
‘हारले हामीलाई धेरै कुरा सिकाउँछ । बिल्बाओसँग हारेपछि हामीले ड्रेसिङ रुममा निकै चिन्तासाथ छलफल गरेका थियौं । हामी यो हारपछि पनि एकताबद्ध छौं,’ पिकेले भने ।
उनले अबका हरेक खेलमा टिमले धेरैभन्दा धेरै मेहनत गर्दै अघि बढ्ने बताए । ‘हामी आगामी खेलबाट जितको बाटोमा फर्किन चाहन्छौं । हरेक खेलमा हामी १०० प्रतिशत मेहनत गर्न चाहन्छौं,’ पिकेले भने, ‘मलाई विश्वास छ, आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्यौं भने हामी यही सिजन ला लिगा र च्याम्पियन्स लिग जित्न सक्छौं ।’
प्रकाशित मिति २६ माघ २०७६, आईतवार ११:१५